November 2020 - Myanmar Man United.
မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်.. မေမေလာရင် မဲပေးမယ်.. ကိုရိုနာ လာရင် ဗြုံးကနဲ ပြေးတွေ့မယ်…. ( ပိုကြီးလာမယ့်အသက်ကို မသိစိတ်က တွန်းလှန်ကြ၊ ရင်လေးကြသလို သွေးဆုံးဘာညာ ဟိုမုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ငယ်မူ ပြန်ချင်တာလည်း ပါတာပေါ့၊ များသောအားဖြင်း ၄၇-၅၅ ကြားတွေ။ )
scholes | 30/11/2020
မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်.. မေမေလာရင် မဲပေးမယ်.. ကိုရိုနာ လာရင် ဗြုံးကနဲ ပြေးတွေ့မယ်…. ( ပိုကြီးလာမယ့်အသက်ကို မသိစိတ်က တွန်းလှန်ကြ၊ ရင်လေးကြသလို သွေးဆုံးဘာညာ ဟိုမုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ငယ်မူ ပြန်ချင်တာလည်း ပါတာပေါ့၊ များသောအားဖြင်း ၄၇-၅၅ ကြားတွေ။ ) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ Midlife Crisis လို့
ရန်ကုန်မြို့မှာ စပါးအုံးလို မြွေကြီးတွေ အတွေ့များလာတာ ဘာကြောင့်လဲ ( သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ခြေမှာ မြေအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေက ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။ ငလျင်တွေ ဒီ့ထက်လှုပ်လာမလား။ ရေတွေ ဒီ့ထက်ခမ်းသွားမလား……..)
ရန်ကုန်မြို့မှာ စပါးအုံးလို မြွေကြီးတွေ အတွေ့များလာတာ ဘာကြောင့်လဲ ( သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ခြေမှာ မြေအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေက ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။ ငလျင်တွေ ဒီ့ထက်လှုပ်လာမလား။ ရေတွေ ဒီ့ထက်ခမ်းသွားမလား……..) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက်နေ့အထိ လမ်းသွားလမ်းလာနှင့် နေအိမ်ခြံဝင်းတို့တွင် မြွေများတွေ့ရှိမှု
ယခုနှစ် ရာပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ကျွန်တော်သည် ကျောင်းသား နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖူးပါ၏။ ပထမအကြိမ်မှာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ကြိမ်မှာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် အထိဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏စိန်ရတုကာလ ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလနှင့်ပတ်သက်၍ရေးသားမှုများစွာမတွေ့ရသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကာလ အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်မျှဝေလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်မိပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်ကျင်းပသော အခြေခံပညာအထက်တန်းစာမေးပွဲကို
တရုတ်ကို ၂၀၀၇မှာ ထွက်ပြေးလာခဲ့ဖူးတဲ့ ယွန်းမီပါ့ခ် (YEONMI PARK) ပြောတဲ့ အာဏာရှင်နိုင်ငံများအောက်တွင် လိင်ကျွန်အဖြစ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ရောင်းစားခံနေရခြင်းများ…
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူတွေဟာ သူတို့နိုင်ငံကထွက်ပြေးလာပြီးနောက် တရုတ်မှာ လိင်ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခံနေရကြောင်း တရုတ်ကို ၂၀၀၇မှာ ထွက်ပြေးလာခဲ့ဖူးတဲ့ ယွန်းမီပါ့ခ် (Yeonmi Park) က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုပါတယ် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော မြောက်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာ မြောက်ဘက်နယ်စပ်ကနေ တရုတ်ကို ထွက်ပြေးနေကြပါတယ်၊ သို့သော်လည်း သူတို့အထဲက မိန်းကလေးများစွာဟာ လူကုန်ကူးသူတွေရဲ့လက်တွင်းသို့ ကျရောက်ပြီး တရုတ်မှာ လိင်ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခံခဲ့ကြရပါတယ် ယခုအခါ
ကျဆုံးစစ်သည်တွေ မြုပ်နှံတဲ့ စစ်သင်္ချိုင်းတွေမှာ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ စည်ကားနေသောာ အာမေးနီးယား…
နာဂိုနို-ကာရာဘက် စစ်ပွဲအပြီးတွင် အာမေးနီးယားကျဆုံးစစ်သည်တော်တွေကို မြုပ်နှံတဲ့ စစ်သင်္ချိုင်းတွေမှာတော့ ခုရက်ပိုင်း ကျဆုံးစစ်သည်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အမြဲတမ်းလိုလို တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ထောင်ချီ ကျဆုံးတဲ့ စစ်သားတွေအများကြီးရဲ့ အလောင်းတွေထဲက မီးလောင်ပျက်စီး အပိုင်းပိုင်းအစစဖြစ်သွားတဲ့ အလောင်းတွေကို ပြန်မသယ်နိုင်ခဲ့ဘဲ စစ်မြေပြင်မှာ မီးသဂြိုလ်၍ ပြာအိုးများသယ်ခဲ့ကာ အထိမ်းအမှတ် ဂူလေးတွေ တည်ထားတာ တွေ့ရပါသည်။ သယ်လို့ ရတဲ့ အလောင်းမှန်သမျှတော့
တရုတ် ခြိမ်းခြောက်မှု တိုးလာနေစဉ် တိုင်ပေက ရေငုပ်သင်္ဘော အစုအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့
တိုင်ပေဟာ ယင်းရဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘော တပ်ဖွဲ့စုကို အင်အားတိုးချဲ့ဖို့ ပြည်တွင်းဖြစ် ရေငုပ်သင်္ဘောသစ်တွေ တည်ဆောက်မှုကို ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်က စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေကျင်းဆီကနေ ရန်လိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ တိုးမြင့်လာနေချိန် တိုင်ပေအနေနဲ့ ယင်းရဲ့ ကာကွယ်ရေး လုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ဖို့ လုပ်ဆောင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးတဲ့
တရုတ်သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပိုမိုကြီးမားသော ပြဿနာများတွင် သဘောတူလိုက်လျောလာစေရရန် နည်းဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ် နယ်စပ်ပဋိပက္ခများအား ပိုမိုအားပေးလာခဲ့ကြောင်း မဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်သူ ဘာတေးလ်လစ်တနာ ကဆိုသည်။ ၁၉၆၂ အိန္ဒိယ-တရုတ်စစ်ပွဲနှင့် လတ်တလော လာဒက်ခ် ဒေသတိုက်ပွဲအရ လစ်တနာ က အေးရှားတိုင်းမ်၏ ထင်မြင်ချက်အပိုင်းတွင် “တရုတ်က ဒီကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ခါးသီးတဲ့ နယ်စပ်ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းဖို့ တစ်ကယ်နည်းလမ်းရှာနေသလား ဒါမဟုတ် ဒီနယ်စပ်တွေကို
ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံမှာ ခိုလှုံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရှိရှိ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အညီ ရေရှည်ခံမယ့် ဌာနေပြန်ရေး ဖြစ်လာဖို့ မြန်မာ အစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိအားပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ A. K. Abdul Momen က ထောက်ပြ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာ သမ္မတရာထူး ပြောင်းလဲ တာဝန်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေစဉ် အရေးကြီးတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ရာထူး ၆ ခုအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့က ရာထူးလျာထားသူတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားချိန် အမေရိကန် ပြန်လာပြီ။ နောက်ဆုတ်မှာ မဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာကြီးကို ဦးဆောင်ဖို့အဆင့်သင့်ပဲလို့ ဘိုင်ဒန်က ကြွေးကြော်သွားပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ အပြောင်းအလဲ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို